ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မနက်ဖြန် ထားဝယ်မှာ ဘာတွေလုပ်မလဲ ~ Htet Aung Kyaw
1:59 PM Htet Aung Kyaw No comments
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မနက်ဖြန် -တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ အစောဆုံးလေယဉ်နဲ့ ထားဝယ်မြိုဆီ ရောက်လာမယ်လို့မျော်လင့် ထားကြောင်း ထားဝယ်နဲ့ လောင်းလုံးရှိ NLD ပါတီဝင်တွေကပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါတီဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမဲ့ ထားဝယ်မြိုက ပါတီရုံး
ထားဝယ်ကိုရောက်ရောက်ချင်း ထားဝယ်မြိုရှိ ပါတီ-တိုင်းရုံးဆီ အယင်ဆုံးဝင်ပီး အဲဒီမှာ တိုင်းဥက္ကဌ ဦးလှမင်း အပါဝင် တိုင်းကော်မီတီဝင်တွေ။ ထားဝယ်။ လောင်းလုံး။ သရက်ချောင်းနဲ့ ရေဖြူမြိုနယ်က ပါတီဝင်တွေနဲ ပထမ-ဆုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကြိုဆိုဖို့ပြင်ထားတဲ့ ရုံးတွင်းက မြင်ကွင်း
ပါတီဝင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပီးတဲ့အခါမှာတော့ ပြည်လူထုစည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အဖြစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မှာ NLD ပါတီက ၀င်ပြိုင်ဖို့စာရင်းပေးထားတဲ့ ထားဝယ်နဲ့ တနာရီခန့် ကားမောင်းရ တဲ့ လောင်းလုံးမြိုဆီ သွားပီး လောင်းလုံးမြိုနယ် ပါတီရုံးရှေ့မှာ လူထုဟောပြောပွဲလုပ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
လောင်းလုံးကဟောပြောပွဲပီးတာနဲ့ နောက်ထပ် မီနစ် ၃၀- ခန့်ကားမောင်းရတဲ့ အောက်ရေဖြူ ရွာမှာ လူထုဟောပြောပွဲနောက်တခုထပ်လုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။
အဲဒီဟောပြောပွဲပီးရင်တော့ အောက်ရေဖြူကနေ ထားဝယ်ဖက်ကိုပြန်လာပီး ကမြောကင်းတံတားအနီး သို့မဟုတ် ထားဝယ်တက္ကသိုလ်အနီးရှိ သောကြာပြင် လမ်းဆုံမှာ နောက်ထပ်လူထုဟောပြောပွဲတခုလုပ် မယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီပွဲပီးရင် မောင်းမကန်ကမ်းခြေကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပီး အဲဒီမှာ လူထုဟောပြောပွဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့ ထားဝယ်မြိုက တော်ဝင်စတိုးရှေ့ မြင်ကွင်း
မောင်းမကန်ကဟောပြောပွဲပီးတာနဲ့ လောင်းလုံးမြိုနယ်က ဟောပြောမှုအားလုံးကို ရပ်တန့်ပြီး ထားဝယ်မြို ဆီတန်းပြန်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ထားဝယ်မြိုကအထွက် လေယဉ်ကွင်း မသွားခင်လေးမှာ တော်ဝင်ဦး စတိုး ရှေ့မှာ ထားဝယ်လူထုကို ဟောပြောပွဲတခုလုပ်ပေးဖို့စိစဉ် ထားတယ်လို့ ထားဝယ်နဲ့ လောင်းလုံးရှိ ပါတီ ၀င်လူငယ်တွေဆီကနေသိရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့ လောင်းလုံးမြိုက ပါတီရုံး
ဒါဟာ သူတို့ဖက်က စီစဉ်ထားတဲ့အစီစဉ်တွေသာဖြစ်ပီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရောက်လာမဲ့ အချိန်။ လေယဉ် အချိန်ဇယား။ ရာသီဥတုနဲ့ တခြားအခြေနေတွေပေါ်မူတည်ပြီး ဟောပွဲပြောပွဲ အစီစဉ် တွေ ပြောင်းလဲတာမျိုး ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့လဲ သူတို့ကဆိုပါတယ်။
ဒီခရီးစဉ်ဟာ ၁၉၉၀-ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလ မဲဆွယ်မှုနောက် ပိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပထမ-ဆုံး ထားဝယ်ဒေသခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုခရီးစဉ်ဟာ ပါတီ စည်းရုံးရေးကိစ္စသာဖြစ်ပီး မဲဆွယ် တဲ့ခရီးစဉ်မဟုတ်သေးဘူးလို့ ပါတီ-ဗဟိုတာဝန်ရှိသူတွေကပြောထားပါတယ်။
လောင်းလုံးနဲ့ ကျွန်းစုမြိုနယ်တွေမှာဝင်ပြိုင်မဲ့ NLD အမတ်လောင်း ဦးအောင်စိုးနဲ့ ဒေါ်တင်တင်ရီ
ဧပြီလ ၁-ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ လစ်လပ်နေရာ ၄၈-နေရာစလုံးအတွက် NLD ပါတီက ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့စာရင်းပေးထားပီး အဲဒီထဲမှာ တနသာင်္ရီတိုင်းရှိ လောင်းလုံးမြိုနယ် နဲ့ ကျွန်းစုမြိုနယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ လောင်းလုံးမြိုနယ် အတွက် NLD အမတ်လောင်းကတော့ ဦးအောင်စိုး ဖြစ်ပီး ကျွန်းစုမြိုနယ်အတွက် ကတော့ ဒေါ်တင်တင်ရီ-ဖြစ်ပါတယ်။
လောင်းလုံးမြိုနယ်မှ လှပတဲ့ ပင်လယ်ကမ်းခြေတခု
အခု ထားဝယ်ခရီးစဉ်ဟာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပထမ-ဆုံး ရန်ကုန်မြိုပြင်ခရီးစဉ်ဖြစ်ပီး ထားဝယ်ခရီးစဉ်ပြီးရင် မန္တလေးဖက်ကို ဆက်သွားမယ်လို့ ပါတီဝင်တွေဆီကနေ သိရှိရပါတယ်။ ။
Suu Kyi on campaign trip for Myanmar's by-election
DAWEI, Myanmar — Myanmar's opposition leader Aung San Suu Kyi will travel outside Yangon on the campaign trail Sunday withavisit toasouthern city to promote her party ahead of April's by-elections.
Nobel Peace Prize winner Suu Kyi, who is standing for office in the polls after spending much of the past two decades in detention, is expected to be greeted by large crowds on her one-day visit to the coastal district of Dawei.
Her National League for Democracy (NLD) party is running for all 48 seats up for grabs in the by-elections and she is standing inarural constituency near Yangon, but Sunday's trip is in support of NLD candidate Aung Soe.
"We have requested many times for Daw Suu to campaign for our region," he told AFP. Daw isaterm of respect in Myanmar.
"She hasn't been here for 23 years. The people of Dawei are looking forward to it very much," said Aung Soe, who is standing inalocal township.
Suu Kyi has spent much of the past two decades under house arrest and the NLD was stripped of its status asalegal political party after boycottinganational election in 2010, saying the rules were unfair.
The 66-year-old was releasedafew days after the poll and the new quasi-civilian government has since given her approval to return to the official political arena, against the backdrop ofadramatic reform programme.
The NLD won an election in 1990 byalandslide while Suu Kyi remained under house arrest, but the ruling generals never allowed the party to take power.
The coming April polls are to fill places vacated by those elected in 2010 who have since become ministers and deputy ministers in the government.
Although the seats available are not enough to threaten the resounding majority held by the army-backed ruling party, Suu Kyi's participation, if the polls are free and fair, will beaboost to the legislature's credibility.
She has made few ventures outside her home city since her release. Her first political trip was to the Bago region north of Yangon, which passed off peacefully and saw her feted by thousands of supporters.
But security wasaconcern as Suu Kyi's convoy was attacked in 2003 duringapolitical trip, in an ambush apparently organised byajunta frightened by her popularity.
Her outing on Sunday takes her to the area whereahuge and controversial industrial site, the Dawei Development Project, is set to transformasleepy strip of southern coastline.
The Thai-led, multi-billion-dollar development in the south has sparked fears aboutapotential influx of "dirty" industry and the displacement of thousands of people.
But in another sign of burgeoning reform Myanmar's government cancelledaproposed coal-fired power plant at the site this month citing "environmental problems".
(ဒီထဲက ဓါတ်ပုံတချို့ဟာ ထားဝယ်မြိုတော် Facebook မှ တဆင့်ကူးယူဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း)